Video: Sliderocket Beta Na-abịa N’oge Na-adịghị Anya! | Martech Zone
Pịa ma ọ bụrụ na ị ahụla vidiyo ahụ.
Mmepụta:'ve hụla PowerPoint Microsoft. Mana ị hụtụbeghị ihe akwadoro ,ntanetị, ngwa ọrụ mmekorita dị ka Sliderocket - ruo ugbu a. N'ebe a, Mitch Grasso, onye isi na onye nchoputa, na-agwa anyị banyere Sliderocket ụlọ ọrụ ahụ wee gosi anyị ngosi.
Mpempe akwụkwọ mmịfe na-akwadebe maka beta ọha n’oge na-adịghị anya, debanye aha taa.
Tags: imirikitikpaliri atụmatụ afọ ọhụrụmmemme nkwaliteMmekọrịta Mmekọrịtaodeakwụkwọ 4mpiezi uche
SlideRocket dị ịtụnanya. Ana m enye ihe ngosi 2 ozugbo SlideRocket echi na ọgbakọ. Ọ ga - enyere m aka ibiaghachi n’etiti ntanetị na ntanetị na - adị mfe. (N'ezie, m nwere .pdf ndabere m Gmail na na flash mbanye na-mma! Enweghị ike ịtụkwasị obi weebụsaịtị mgbe niile).)
Enwere m ike ịdee njikọ SlideRocket na blọọgụ m n'izu a mgbe ngosi ndị ahụ gasịrị. Ọdịdị dị ọcha.